2019 Ny torolàlana farany momba ny Ipamorelin: Ahoana no fomba hampiasantsika Ipamorelin?
Phcoker dia mpanamboatra matihanina hamokatra vovoka Ipamorelin
Tsy toy ny GHRP-2 sy GHRP-6, Ipamorelin dia tsy misy fiantraikany amin'ny haavon'ny ghrelin ao amin'ny rafitry ny vatanao. Midika izany fa tsy hiaina fiakaran'ny fahazotoan-komana ianao izay zavatra tsara indrindra ho an'ireo izay mampiasa ny vokatra hanampiana azy ireo hanary tavy amin'ny vatana sy hitazomana ny lanjan'ny vatany. Ary koa, ireo izay mandray an'i Ipamorelin ho vokatra manohitra ny fahanterana dia manampy azy ireo hihazona vatana sy ho tanora kokoa. Ny zava-mahadomelina ity, mandrisika ny vatanao hamokatra hormonina mitombo, midika izany fa tsy misy fanidiana ny famokarana voajanahary GH toy ny tranga tamin'ny fitantananana HGH synthetic.
Ity fanafody ity dia azo ampiasain'ny atleta, bodybuilder, ary ny olon-kafa rehetra izay ambany hormonina mitombo. Ny asan'ny Ipamorelin lehibe dia ny mandrisika ny famokarana hormonina mitombo ao amin'ny vatana. Ny hormonina mitombo dia misy fiantraikany amin'ny vatana iray manontolo, midika izany fa ny faritra rehetra amin'ny vatana sy ny sela dia hiharan'ny fitomboana. Ny mpahay siansa koa dia nanambara fa ny zava-mahadomelina dia afaka manampy ny atleta sy ny bodybuilder hampivelatra hozatra mahia. Noho ny fahafahan'ny zava-mahadomelina hitaomana ny fitomboan'ny sela rehetra ao amin'ny vatana dia misy olona mampiasa ny zava-mahadomelina ho famenon'ny anti-fahanterana.
Manampy amin'ny fandoroana tavy amin'ny vatana be loatra - ny fitomboan'ny hormona mitombo ao amin'ny vatana dia miteraka fitomboan'ny metabolisma izay manampy amin'ny fandoroana ny tavy amin'ny vatana. Na izany aza, ny fanafody dia hahomby eto raha toa ny fampihetseham-batana sy ny sakafo mety. Ohatra, ho an'ireo atleta na bodybuilder izay mazoto miasa, dia hiaina vokatra tsara kalitao izy ireo raha oharina amin'ireo mpampiasa hafa izay tsy miasa. Noho izany, ny fampihetseham-po na ny fiofanana kely dia mety ho fanampiny tsara amin'ny fatranao mba hankafizanao ny tombontsoa Ipamorelin.
Manatsara ny famokarana collagen - Ny Ipamorelin dia voaporofo fa famenon-tsakafo lehibe manampy ny mpampiasa maro hahatratra ny hoditra malama ary na ny hoditra. Ny ankamaroan'ny mpampiasa zava-mahadomelina dia nitatitra fa nahavita hoditra hoditra tanora rehefa avy nandalo fitsaboana Ipamorelin nandritra ny enim-bolana teo. Na izany aza, ireo valiny ireo dia tsikaritra fotsiny ho an'ireo mpampiasa tsy ampy hormonina mitombo. Ho fanampin'izany, ny zava-mahadomelina dia ahafahan'ny mpampiasa maniry volo mahery sy matevina ary salama ihany koa.
Na inona na inona valiny tianao ho tratrarina amin'ny faran'ny tsingerina, dia ny fahaverezan'ny hozatra, ny fihenan-danja, ny hozatra mahia na ny fanatsarana ny haavon'ny hormonina mitombo ao amin'ny vatanao fotsiny, aza manandrana mampiakatra na mampihena ny fatra eo afovoany. ny tsingerina. Soso-kevitra ny hitazomana ny haavon'ny fatra mitovy mandra-pahavitanao ny tsingerina. Ny fitomboan'ny fatra dia mety hiteraka voka-dratsy ary ny vokatra Ipamorelin fotsiny no antenainao eto.
Ankoatr'izay, ny fandraisana ny tsindrona anao rehefa minitra vitsy alohan'ny hisakafoanana dia fomba iray hafa ilaina mba hahazoana antoka fa mandeha tsara ao amin'ny lalan-dranao. Alohan'ny hanombohanao ny fatra anao dia aza misalasala manontany ny dokoteranao momba ny zava-mahadomelina. Ny fampiakarana ny ahiahinao mialoha na mandritra ny tsingerin'ny Ipamorelin dia hanampy amin'ny fanamafisana ny valiny ihany koa.
Araka ny voalaza etsy ambony, tsy misy fomba fampiasana Ipamorelin azo lazaina ho marina na diso. Misy làlana fampiasana mihoatra ny iray azonao arahana ary mbola iainanao ny soa azo avy amin'ny zava-mahadomelina. Ianao no manapa-kevitra hoe rahoviana no hampiditra ilay fanafody ao amin'ny fampihetseham-ponao na ny sakafonao. Na firy na firy ny fatra Ipamorelin na ny tsingeriny, ny tanjona faratampony hahatratra ny tanjonao.
5.Ipamorelin Famerenana ny mpampiasa: Tsy toa ilay olona manaraka aho
Raha jerena ireo tsikera Ipamorelin isan-karazany amin'ny sehatra samihafa, mazava fa ny ankamaroan'ny mpampiasa dia faly amin'ny valiny niainany taorian'ny nahavitany ny tsingerin'ny fatra. Ny mpanjifa dia manome valiny samihafa izay fahita amin'ny ankamaroan'ny vokatra. Ny mpampiasa sasany dia hanao tatitra momba ny vokatra Ipamorelin tsara hatrany raha ny hafa kosa haneho ny tsy fahafaham-pony. Ipamorelin dia stimulator hormonina mitombo nefa koa manampy ny mpampiasa hahatratra tanjona isan-karazany amin'ny fiainany. Ohatra, ny atleta sy ny bodybuilder dia mampiasa ity fanafody ity hanampiana azy ireo hanatsara ny tanjaky ny vatany amin'ny ankapobeny ary hahatratra hozatra mahia.
Mba hanatsarana ny zava-bita amin'ny fifaninanana dia mila angovo ampy izay atolotry Ipamorelin ireo atleta, ka amin'izany dia mampalaza ity zava-mahadomelina ity amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Na izany aza, ireo atleta izay miaraka amin'ny zava-mahadomelina amin'ny sakafo mety sy ny fampihetseham-batana mety dia mankafy ny tombotsoan'ny Ipamorelin amin'ny farany ambony. Ny zava-mahadomelina dia azo ampiasaina miaraka amin'ny famenon-tsakafo hafa ho amin'ny fanatanterahana ny valiny lehibe indrindra.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia nanome an'i Ipamorelin isa tsara sy nanome valiny tsara ihany koa. Ohatra, mpampiasa maro no nilaza fa nanampy azy ireo hahatratra ny tanjony teo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena io fanafody io. Ny sasany manondro ny fitomboan'ny hozatra matavy noho ity zava-mahadomelina ity. Ny bodybuilder sasany dia voatonona nilaza fa mampiasa Ipamorelin izy ireo amin'ny fahaverezan'ny tavy ary mahagaga izany hatreto. Ny hormonina amin'ny fitomboana dia tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny faritra maro amin'ny vatana, ary ireo izay mampiasa an'io fanafody io dia azo antoka fa hitombo ny hozatra ary hamerina amin'ny laoniny ny sela. Misy ireo mpampiasa nifidy ity vokatra ity ho toy ny famenon'ny anti-fahanterana, ary nanome valiny tena tsara.
Torak'izany koa, ireo mpampiasa Ipamorelin sasany dia tsy nanam-potoana mora ary mimenomenona noho ny fiatraikany mafy. Na izany aza, raha mampiasa Ipamorelin amin'ny dosia avo ianao na tsy mandeha manao fizahana ara-pahasalamana dia mety ho mafy ny vokany. Satria miasa ho an'ny namanao ny zava-mahadomelina, dia tsy mandeha ho azy fa hitondra vokatra Ipamorelin kalitao ao aminao.
Ipamorelin toy ny fanafody hafa ihany rehefa tsy ampiasaina tsara dia mety hisy vokany hafa. Na izany aza, mba hampihenana ireo vokatra hafa ireo dia avelao ny dokoteranao hametraka fatra sy tsingerina mety. Misy ny olona manao fahadisoana amin'ny fividianana ny zava-mahadomelina amin'ireo sehatra an-tserasera isan-karazany avy eo manomboka mampiasa azy. Araka ny voalaza tetsy aloha, ny fanafody dia ampiasaina amin'ny tanjona fikarohana ara-pitsaboana ary noho izany, mety ho sarotra aminao ny mametraka doka mety aminao. Ny zavatra tsara amin'ity zava-mahadomelina ity dia ny fiatraikany dia somary sariaka raha oharina amin'ny zava-mahadomelina hafa mandrisika ny hormonina. Na izany aza, ireto ny sasany amin'ireo voka-dratsy iraisana mifandraika amin'ity fanafody ity;
Ny vidin'ny Ipamorelin dia miovaova ihany koa amin'ny orinasa iray mankany amin'ny iray hafa. Mandehana any amin'ny orinasa mendri-kaja izay manana firaketana tsara amin'ny fanomezana vokatra kalitao. Mitadiava hevitra samihafa momba an'i Ipamorelin ary diniho izay lazain'ny mpanjifa momba ny vokatra avy amin'ny orinasa. Raha tsy izany, ny dokoteranao dia afaka manampy anao amin'ny fitadiavana ireo famokarana sy famatsiana Ipamorelin tsara indrindra. Aza milatsaka amin'ny rehetra Ipamorelin peptide Raha mivarotra anao manodidina anao ianao, tadidio fa ny zava-mahadomelina ihany no hanampy anao hahatratra ny tanjonao.
Na dia antony iray aza ny tetibola mandritra ny fanapahan-kevitrao amin'ny fividianana, ny vidiny Ipamorelin dia tsy tokony hatao loha laharana amin'ny kalitaon'ny vokatra izay hovidinao. Ny ankamaroan'ny vokatra ambany kalitao dia mora vidy kokoa hisintomana ny mpanjifa. Na izany aza, tsy midika izany fa tokony handeha amin'ny vokatra lafo indrindra ianao. Misafidiana orinasa manolotra fanafody manara-penitra amin'ny vidiny mirary. Ny vidin'ny Ipamorelin dia miankina amin'ny habetsaky ny zava-mahadomelina, ny fivarotana fatra 2mg amin'ny $ 15 ka hatramin'ny $ 25. Raha mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala mifandray aminay, ary ny ekipa mpanohana ny mpanjifa afaka mamaly ny ahiahy sy ny fanontanianao rehetra.
Semenistaya, E., Zvereva, I., Krotov, G., & Rodchenkov, G. (2016). Ny fitrandrahana peptide mavitrika biolojika kely amin'ny cartridges sy ny microelution 96 ‐ fantsakana mivoaka amin'ny ranon'olombelona. Ny fitsapana sy ny fanadihadiana, 8(9), 940-949.
Asa, HDT (2017). Ny vidin'ny Peptide CJC-1295. Star.
Pinyot, A., Nikolovski, Z., Bosch, J., Segura, J., & Gutiérrez-Gallego, R. (2010). Amin'ny fampiasana sela na fonosana ho an'ny famehezana ny receptor: hormonina fitomboan'ny secretagogues. Biochemistry, 399(2), 174-181.